National COVID-19 Immunization Campaign begins in Seychelles | Other
Caafimaadka Warka • kale • dib u dhiska safarka • Ammaanka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • News Trending
Ololaha Tallaalka Qaranka ee COVID-19 wuxuu ka bilaabmayaa Seychelles
Bogga ugu weyn » posts » kale » Ololaha Tallaalka Qaranka ee COVID-19 wuxuu ka bilaabmayaa Seychelles
Seychelles, oo ka mid ah meelaha ugu badan ee dalxiisleyda loo tago dadka safarka ah, ayaa u boodda dhanka tallaalka iyadoo waddanku uu bilaabay Ololaha tallaalka qaran ee COVID-19 Axaddii, Janaayo 10, 2021
Ahaanshaha dalkii ugu horreeyay Afrika ee billaaba barnaamijka tallaalka qaran ee COVID-19, Seychelles ujeedadiisu tahay inuu noqdo dalkii ugu horreeyay adduunka ee tallaala 70% ee dadka da'doodu ka weyn tahay 18-ka sano si loo helo tallaal-difaac.
Waxaa hogaaminaya tusaale ahaan, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Seychelles, Mudane Wavel Ramkalawan, isagoo qaadanaya Tallaalka SinoPharm COVID-19, isaga oo ka dhigaya Madaxii ugu horreysay ee Afrika ee qaadata tallaalkii ugu horreeyay.
Daahfurka ololaha, oo lagu qabtay Isbitaalka Seychelles wuxuu ku bilaabmay jawi aad u sarreeya iyadoo ilaa boqol qof oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaal, hawlwadeenno caafimaad, shakhsiyaad warbaahineed ay heleen tallaalkoodii ugu horreeyay ee SinoPharm COVID-19 oo muujinaya taageeradooda ku aaddan dadaallada tallaalka dalka.
Daahfurka ka dib, Wasaaradda Caafimaadka waxay u soo saari doontaa maamulka Talaalka kooxaha muhiimka ah ee dalka laga bilaabo Isniinta, Janaayo 11, 2021, laga bilaabo Shaqaalaha Daryeelka Caafimaadka iyo kooxaha kale ee safka hore oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya shirkadaha dalxiiska.
Madaxweyne Ramkalawan wuxuu ku celiyey baahida loo qabo in dalku u midoobo qaran ahaan isla markaana uu isu soobaxo masuuliyiinta caafimaadka si ay gacan uga geystaan ​​xakamaynta faafida cudurkaan dilaaga ah, ilaalinta nolosha muwaadiniinta oo dhan iyo soo celinta horumarka dhaqaale ee dalka.
Waxaa ka soo qeyb galay xaflada madaxweynihii hore ee jamhuuriyada, Mudane Danny Faure, oo u mahadceliyay madaxweyne Ramkalawan soo dhaweynta uu u sameeyay iyo inuu qaatay. Tani waxay si weyn u muujineysaa isku duubnida dalka, laga soo bilaabo hoggaamiyeyaashii hore iyo kuwa hadda jira, maadaama ay la dagaallameyso cudurka faafa ee COVID-19.
Madaxweyne Ramkalawan wuxuu sidoo kale si gaar ah ugu mahadceliyey Dhaxal Sugaha Abu Dhabi iyo Kuxigeenka Taliyaha Sare ee Ciidamada Qalabka Sida ee Imaaraadka, Mudane Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan deeqda 50,000 ee doc ee ah tallaalka Sinopharm COVID-19, oo la bixiyey intii uu socday Madaxweynaha. Booqashadii Ramkalawan ee Abu Dhabi bishii Diseembar.
Madaxweynaha ayaa intaa ku daray in tani ay markhaati ka tahay xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada ummadood oo la sii adkeeyay iyada oo loo sii marayo taageerada joogtada ah ee waxtarka labada dhinacba.
“Ololaha tallaalka noocan oo kale ah, Seychelles waxay higsaneysaa inay noqoto waddanka ugu horreeya adduunka ee tallaala ugu yaraan 70% dadka ka badan 18-ka. Halkaas waxaan ka awoodi doonnaa inaan ku dhawaaqno Seychelles inay tahay ammaan COVID, ”ayuu madaxweyne Ramkalawan carabka ku adkeeyay.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in dowladda Imaaraadku ay sidoo kale dhowaan dalka ugu deeqi doonto qayb kale oo tallaal ah.
Madaxweyne Ramkalawan ayaa sidoo kale uga mahadceliyey Dowlada Hindiya dalabkii ahaa 100,000 oo ah talaalka Oxford Astra-Zeneca kaas oo lagu wado inuu dalka yimaado dhamaadka bisha Janaayo.
Isagoo ka hadlaya talaalka Wasiirka Arimaha Dibada iyo Dalxiiska ee Seychelles, Mudane Sylvestre Radegonde wuxuu xusay ahmiyada ay u leedahay talaabadan ay dowlada u leedahay warshadaha.
“Ololaha tallaalka COVID-19 waa mid muhiim u ah dib-u-bilaabidda warshaddeena dalxiis iyada oo waddanku isku dheeli tirayo dadaalkiisa si uu u ilaaliyo howlaha dalxiiskiisa isla markaana looga ilaaliyo dadkiisa in uusan sii faafin cudurka. Adduunku ma istaagin oo waxaa jira dad weli jecel inay safraan. Waxaan u baahanahay inaan si dhakhso leh dib ugu dhisno warshadeena si barwaaqada dhaqaale ay ugu tiirsan tahay. Ayuu yidhi wasiir Radegonde.
Wasiirka Radegonde wuxuu sii cadeeyay baahida loo qabo wada-hawlgalayaasha warshadaha dalxiiska inay u feejignaadaan nabadgelyadooda iyo badbaadada dadweynaha.